Elon Musk Tweets iji mee ka okwu ya dị nro na Apple | Esi m mac
Elon Musk na-aza na twitter iji mee ka okwu ya dị nro banyere Apple
Yesnyaahụ anyị gwara gị banyere Ihe CEO nke Tesla kwuru, Elon Musk n'oge mkparịta ụka na nso nso a na akwụkwọ akụkọ German Handelsblatt. Onye isi oche ahụ, amaara maka ikwu uche ya n'ọtụtụ oge, kwuru ụfọdụ okwu ndị a ga-atụgharịrị n'ụzọ dị mfe dịka nkatọ na nhazi nke Apple Watch, na ogo nke ndị ọrụ ụlọ ọrụ Tesla na-abụghị nke apụlMa n'ehihie Fraịdee, CEO wepụtara ụfọdụ echiche iji mee ka okwu ndị ahụ dị nro.
Okwu mbu o kwuru banyere oku a "Agha na ịchụ nta" n'etiti Tesla na Apple nke ndị injinia akụrụngwa. "Ha goro ndị anyị chụrụ n'ọrụ"Onye isi ụlọ ọrụ ahụ kwuru. «Anyị na-egwu egwu mgbe niile Anyị na-akpọ Apple 'Tesla's Graveyard'. Ọ bụrụ na ịmeghị ya na Tesla, ị ga-arụ ọrụ na Apple. " Ọ dị ezigbo mma na echiche m.
Onye isi oche ahụ kọwapụtara nkenke ihe kpatara na ọ naghị eche ọtụtụ ihe gbasara atụmatụ Apple iji wuo a ụgbọ ala eletrik:
Have nwetụla mgbe ị lere anya na Apple Watch?. Hahaha. Ọ bụghị akpọrọ ihe. Ọ dị mma na Apple na-agagharị n'ụzọ dị ukwuu na usoro a, mana ụgbọ ala dị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na e jiri ya tụnyere ekwentị ma ọ bụ kọmputa. Gị Nweghị ike ịrịọ Foxconn meere m otu nde ụgbọ ala, ọ dịghị mfe.
E kwuru okwu ndị a n'ọnwa gara aga n'oge nleta Elon Musk na Europe. Onye isi oche ahụ jiri Twitter n'ehihie Fraịde a mee ka okwu ya doo anya:
Yo, anaghị m akpọ Apple asị. Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi. Enwere m mmasị na ngwaahịa ha ma enwere m obi ụtọ na ha na-eme EV.
- Ilọn Musk (@elonmusk) October 9, 2015
A sụgharịrị n'asụsụ Spanish, Akpọghị m asị Apple. Ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nwere ọtụtụ ndị nwere ọgụgụ isi. M hụrụ ha n'anya na ngwaahịa na obi dị m ụtọ na ha na-eme ihe EV ». EV (Electricgbọ eletrik). Okwu ndị a ekwesịghị iju anyị anya, dịka onye isi ọrụ abụwo olu n’oge gara aga iji mee ka Apple bịarukwuo nso iji ụgbọ ala eletrik abanye ụlọ ọrụ ụgbọ ala.
Banyere elekere ahụ, Jony na ndị otu ya kere ihe mara mma, mana arụmọrụ anaghị arụ ọrụ. Site na nke 3, ọ ga-abụ.
A sụgharịrị n'asụsụ Spanish, “Banyere elekere ahụ, Jony na ndị otu ya rụpụtara ọmarịcha atụmatụ, mana arụmọrụ ahụ ekwenyeghị. Ma mbipute nke 3 ga-abata ». Elon Musk kwuru banyere Onye Mmebe Apple na ndị otu ya, na-ekele ya na nhazi nche ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » Noticias » Elon Musk na-aza na twitter iji mee ka okwu ya dị nro banyere Apple
Esi gbanyụọ "Shake to Cancel" na iOS 9
Ogwe amụma na-egosi anyị ihu igwe na desktọọpụ